यसकारण तो*डियो रोशनी शाही र चित्रजंग शाहीको २८ वर्ष पुरानो दाम्पत्य जीवन ! – Life Nepali
यसकारण तो*डियो रोशनी शाही र चित्रजंग शाहीको २८ वर्ष पुरानो दाम्पत्य जीवन !
काठमाडौं, असोज १६ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौ’न दु’र्व्यवहारको आ’रोप लगाएर पनि आफ्नो ब’यान फेर्दै महरालाई ‘पिता समान’ भनेकी रोशनी शाहीको दा’म्पत्य जीवन टु’टेको छ ।उनका पति चित्रजंग शाहीले बिहीबार फेसबुकमा रोशनी र आफ्नो ह’स्ताक्षरसहितको ह’स्तलिखित वि’वरणमार्फत दा’म्पत्य जीवन तो’डिएको जानकारी गराएका हुन् ।‘हामी २८ वर्षसम्म सँगसँगै दिन बि’तायौं र समयको ग’तिसँगै अ’लग हुने नि’र्णयमा पुगेका छौं । ध’न्यवाद शुभ चि’न्तकहरुमा,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन् ।
चित्रबहादुर र रोशनीको ह’स्ताक्षर रहेको लि’खितपत्रमा भनिएको छ, ‘थु’प्रै उ’तारचढावबीच हाम्रा साथसाथ २८ वर्ष दिनहरु बि’ते । समयको गतिसँगै अ’सहमति अ’सन्तुष्टि आउँदा रहेछन् । तथापि खुसीसाथ अ’लग अ’लग बस्ने नि’र्णय गरेका छौं । का’नुनी प्र’क्रियाको नि’रन्तरताका साथ ।’रोशनीले गत आइतबार त’त्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा आ’फ्नो को’ठामा आएर आफूमाथि ब’लात्कार गरेको आ’रोप लगाएकी थिइन् । उनको भिडियो अ’न्तरवार्ता सोमबार सा’र्वजनिक भएको थियो । सोमबार नै महराले स’भामुख प’दबाट रा’जीनामा दिएका थिए ।
मंगलबार भने रोशनीले ब’यान फे’र्दै अर्को अ’न्तरवार्ता दिइन्, जसमा महरा आफ्नो पिता स’मान रहेको उनले बताएकी छिन् । उनले महराबाट आफूलाई दु’र्व्यवहार नभएको पनि सो भिडियोमा ब’ताएकी छिन् ।ए’क्कासी चित्रजंगले बिहीबार रोशनीसँगको दा’म्पत्य जी’वन अ’न्त्य भएको जा’नकारी दिएका हुन् । उनीहरुबीचको दा’म्पत्य जी’वन अ’न्त्य हुनुमा महरा सं’लग्न भनिएको यौ’न दु’र्व्यवहार का’ण्ड नै प्रमुख का’रक मानिएको छ ।
Previous दशैको मुखमा सेफ्टी ट्यांकीभित्र एकै परिवारका ५ जनाको श*व भेटियो, उनीहरुको आ*त्माले शान्ति पाओस्
Next महरा रोशनीको घरमा पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा देखियो !